"Fa ireo nanery Azy (nanery an’i Jesosy) ka nanao hoe : Mitoera aty; aminay ; fa efa ho hariva izao, ka lasan-davitra ny andro. Dia niditra hitoetra tao aminy Izy." Lioka 24:29
Mendrika hosaintsainintsika ny fomba nameloman’i Elisa indray ilay zaza tao an-trano. Natsotra teo am-parafarany ilay zaza maty. Nanidy ny varavarany aloha i Elisa, mba hitokana miaraka aminy. Mila fotoana ny asan’i Elisa, nanam-paharetana izy. Nandehandeha eran’ny efitrano izy, ary avy eo dia niverina teo amin’ilay zaza. Farany, nievina impito ilay zaza, porofo mazava fa velona izy. Dia niantso ny reniny i Elisa ary nanolotra ny zaza taminy.
Nandritra izany fotoana izany, mba inona kosa no nataon’ny reniny? Efa naka an’i Elisa izy, ary ankehitriny dia miandry… Ao an-trano i Elisa, mikarakara ny zanany, ampy azy izany. Tsy nanelingelina izy, tsy nandondòna tsy an-kijanona mba hanontany… Tsia, fa navelany irery tao izy mianaka.
Inona no fampianarana azontsika tsoahina amin’io tantara io? Tokony homentsika ny Tompo ny toerany, ao an-tranontsika. Tokony ho toerana hahatsapana sy hankasitrahana ny fanatrehany, ny tokantranontsika. Raha nanao izany isika, dia aoka hatoky Azy, hitondra ny zanatsika am-bavaka eo aminy, ary hamela Azy hiasa. Aoka ny ankizy tsirairay hampirisihina hifandray manokana aminy. Koa aoka izy ireo hozarina hamaky teny sy hivavaka ho an’ny tenany.
Avelao ny Tompo hiasa «mangingina ao an’efitrano». Ny asan’ny Tompo dia mila faharetana, asany manokana. Tsy vita indray andro izany. Aoka isika tsy hisisika hanafaingana na hameno ny asan’Andriamanitra. Hamaly ny vavaka ataontsika Andriamanitra, ary ho faly isika hahita ny zanatsika ateraka indray, ho amin’ny fiainana mandrakizay.